Mucaaridka Somalia keenay Shuruud ka yaabisay Dawlada Somalia – KHAATUMO NEWS
Mucaaridka Somalia keenay Shuruud ka yaabisay Dawlada Somalia
Inkasta oo uu Madaxwayne Farmaajo arrinta doorashada iyo tan amniga ba u xilsaartay RW Rooble, Waxaa siyaasiyiinta iyo Maamul goboleedyada ka soo horjeeda Madaxwaynaha ay durbaba bilaabeen in ay si negative ah jawaab uga bixiyaan.
Waxa la isku hayay mudadii Teendhada la fadhiyay waxaa ay ahaayeen qodobada:
1In Madaxwaynuhu qoro warqad rasmi ah oo uu Amniga iyo doorashada ugu wareejinayo RW Rooble.
2- In taliyaasha ciidamada ee ku jira ololaha madaxwwayne Farmaajo la badalo.
3- In shirka laga qaybgaliyo saamilayda Siyaasadda dalka, iyo qodobo kale.
Waxaa hadda ku soo biirtay in Siyaasiyiinta Mucaaradku dalbadaan in amniga dalka oo dhan laga wareejiyo Madaxwayne Farmaajo, maadaama ciidamadii qalabka siday ee kala aamin baxeen.
Waa caqabad hor leh oo soo wajihi doonta RW Rooble hadii aanu la imaanin maskax furan oo ku qancinayo dhinacyada is diidan.
Previous Post: DAAWO::Faysal Cali Waraabe Kashifay Sir Uu Sadex Sano Qarinaayay
Next Post: Deg Deg Daawo:Farmaajo Diyaarsaday Goobtii uu Uga Guurilaha Muqdisho
medicare online services login
Maadaama aynu nahay umad Muslim ah, waxaa dhammaanteen aynu ilowney, in ILLAAHAY Maamulo ama Xugmo wax kasta oo dunidan guudkeeda ka dhacaya.
In Somaliya cagaheeda isku taagto oo dawlad hanata Geyiga Somaliyeed la helo; WELI arrinkaa ALLE ma Xugmin, ama WELI arrinkaa ALLE kama dhigin in ay dhacdo.
Sheeko Gaban- oo tusaale inoogu filan hadaan idinla wadaago; Nin xanuunsanaya ayaa nin dhakhtar ah u tegey- oo ku yidhi waan xanuun sanayaaye i caawi!.
Dhakhtarkii wuxuu ku yidhi halkee ku xannuunaysa ee aad ka cabanaysaa? wuxuu ninkii xanuunsanayey ku yidhi laga bilaabo ilaa barxadaa baabuurta la dhigto (car park) iyo ilaa xeeebta bada (coast-line) waa i xanuunaysaa!!! ee i caawi.
Ugu dambayn sheekadan xanuunka ninku waa mid jirta in ninkan xanuunsanayo- LKN, meesha xanuunku ka HAYO ma garanayo.
Cilada Siyaasadeed ee(xanuunka) Somaliya haysa qofba sigaara ayuu u arkaa.
Qaarkeen waxay u arkaan in gacmo shiyeeye ka dambeeyaan arrinka somaliya, Qaarkeen waxay u arkaan in siyaasiyiinta somaliyeed xanuun yihiin, Qaarkeen waxay u arkaan in shacabka somaliyed xanuun yahay, Qaarkeen waxay u arkaan in Qabyaalad, Eex, Qof iyo Qabiil Jeclaysi, Cunfi, Xasad, Musuq, Aqoon daro, Diin la’aan, iwm, halkan ina dhigeen.
asalaama calaykum dhamaan: waxay ila tahay arinka shuruudaha doorashadu maaha wax somali wadato waxaan u arkaa in dalkeenu yahay saaxad la isku haysto siyaasiyiinta somaliduna dhamaantood yihiin kuwo la kala wato oo la kala jira shisheeyaha dalka isku haysta waxaa ii muuqata rajo la,aan illaah bay tahay inaan barino bes illaahoow naga qabo shisheeyaha danahooda naga dhex arka.
waa run xamar bilaa fadhiisatey uma malaynayo in dawlad fiicannkasoobaxayso oo dalkoodhan utaliso dadka muqdisho waxayba kadhaadhacsan in caasimada ay ayagu leeyihiin oo aytahay goofkoodii waxaan si hoose uga warhayaa xitaa inay kahadlaaan canshuurta dawladu qaadato taasoo ay muqdisho gasho malaayiin lacaga oo aan canshuur ahayn waana caasimad soomaaliyeed nina gaar uma sheegan karo hadii taasi dhacdo wA in caasimada laga wareejiyo muqdisho oo meel aan dad sheeganeen lageeyo ama meelxusub looxaar xaaro oo dawladu degto
Waa qodob sax in Farmaajo wareejiyo waayo sidee ku aamini kartaa ninkii maanta kusoo weeraray ee tabar waayay?
Weli wax ma kala cada, waxaa macquul ah in film dhigayaan Qoor Qoor, Guudlaawe, Laftagareen, iyo Rooble.
Ilaa hada Farmaajo wuxuu wareejiyay lama hayo.
xamar wax ka suugi waa shydaan wax ka suug waa meel belo fadhido waa meeldhiig islaam lagu qubay waa meelo daalimin iyo mooryaan wax booba fadhiya farmajo sikasta ha tanaasul nimanka mucaardka khayr ha kasugin dowlad somali ka samir inta casumadi reer sheeganay hadu awood leyaha fura dolwlada 0025 ayuu ka qaadilaha malyiinka lacgta ka soo gasha furahaas0025 cidamada mushaharkeeda dabooli lahayd oo bayle wazirka malyad yiri l askarta mushar loo mahayo sidii cumar cartee askartu ha isudhiibto jabhadaha halkaas ateena somaliya ku baabaday
xamar wax ka suug waa shydaan wax ka suug waa meel belo fadhido waa meeldhiig islaam lagu qubay waa meelodaalimin iyo mooryaan wax booba fadhiya farmajo sikasta ha tanaasul nimanka mucaardka khayr ha kasugin dowlad somali ka samir inta casumadi reer sheeganay hadu awood leyaha fura dolwlada 0025 ayuu ka qaadilaha malyiinka lacgta ka soo gasha furahaas0025 cidamada mushaharkeeda dabooli lahayd oo bayle wazirka malyad yiri l askarta mushar loo mahayo sidii cumar cartee askartu ha isudhiibto jabhadaha halkaas ateena somaliya ku baabaday